Dowladda Kenya oo dib u dhigtay go'aankii ka dhanka ahaa Soomaalida + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Dowladda Kenya oo dib u dhigtay go’aankii ka dhanka ahaa Soomaalida +...
Dowladda Kenya oo dib u dhigtay go’aankii ka dhanka ahaa Soomaalida + Sababta
Nairobi (Caasimada Online) – Dawladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaankii xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo ay ku jiraan qaxooti ay ka mid yihiin boqolaal kun oo Soomaali ah.
Go’aankan ayay ku dhowaaqday Kenya shalay kadib markii ay kulan yeesheen Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Madaxa Hay’adda Qaxootiga Dunida UNHCR Filippo Grandi.
Kenya waxay sheegtay inay xeryahan xiri doonto marka la gaaro bisha 30-ka Juun ee sannadka 2022-ka. Guddi ka socda dawladda Kenya iyo Qaramada Midoobay ayaa billaabi doona qorshaha lagu dedejinayo xiritaanka xeryaha laga billaabo 5-ta bisha May 2022-ka, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay dawladda Kenya.
Kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xeryaha Dadaab iyo Kakuma qaxooyi dhan 433,765. Bishii hore ayey dawladda Kenya soo cusboonaysiisay go’aanka ay doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiga.
Hay’adda xuuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhowaysay go’aanka dawladda Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in go’aanka lagu xiray xeryaha qaxootiga uu yahay mid siyaasadeed, oo ay Kenya ku beegsanesyo Soomaalida, xilli ay is-hayaan dowladda federaalka.